Guddomiye Ku-Xigeenka Rugta Ganacsiga oo ka qeyb-galay Munaasabad lagu daah furayay Xog-keydiyaha Ganacsiga Soomaaliya. - Somali Chamber of Commerce and Industry
Home » News » Guddomiye Ku-Xigeenka Rugta Ganacsiga oo ka qeyb-galay Munaasabad lagu daah furayay Xog-keydiyaha Ganacsiga Soomaaliya.
Guddomiye Ku-Xigeenka Rugta Ganacsiga oo ka qeyb-galay Munaasabad lagu daah furayay Xog-keydiyaha Ganacsiga Soomaaliya.
Ganacsato uu Hogaaminaayo Guddomiye Ku-Xigeenka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed mudane “Galaanbi ” ayaa maanta ka qeyb-galay munaasabad lagu daah furayay Xog-keydiyaha Ganacsiga Soomaaliya oo ah Website casri ah(www.stip.gov.so) oo lagu soo uruuriyey xogaha la xidhiidha Ganacsiga sida shuruucda, xeer-nidaamiyeyaasha iyo guud ahaan xogaha kale ee khuseeya habraacyada Ganacsiga dalka ee ay gacanta ku hayaan hay’adaha dawladda.
Munaasabaddani oo ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda Ganacsiga ayaa ka dhacday Hotel Decele ee magaalada Muqdisho, waxana goob-joog ka ahaa wasirka howlaha guud, Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Ganacsiga, Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda Ganacsiga, La-taliyeyaasha Wasaaradda, mamulka Rugta Ganacsiga, ganacsatada qeybaheeda kala duwan, iyo mas’uuliyiin ka socday Baanka Aduunka.
Guddomiye Ku-Xigeenka Rugta Ganacsiga Mudane Abdirahman Abdullah Adam ” Galaanbi ” oo Madasha ka hadlay, ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu barnaamijkani u lee yahay daah-furnaanta Ganacsiga isla-mar-ahaantaana ay Ganacsatada iyo Maal-gashadeyaasha caalamiga ahi ay si fudud ganacsiyo iyo maal-gashiyo ba uga samayn karaan dalka.